အမှုပြီးပြီ! | Tetelestai! | Real Conversion
၂၀၁၂၊ဩဂုတ်လ၅ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊
သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ယေရှုသည် ပုံးရည်ကိုခံပြီးမှ အမှုပြီးပြီဟု မိန့်တော်မူလျှက်၊ ခေါင်းတော် ကိုငိုက်ဆိုက်ညွတ်၍ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူ၏”(ယောဟန်၁၉း၃၀)။
ယေရှုဘုရားသည် ကားတိုင်ပေါ်၌ နံနက်ပိုင်း၉း၀၀နာရီအချိန်တွင် ရိုက်ထားခြင်းခံ ခဲ့ပါသည်။ စောင့်ကြည်နေသော သူတို့က၊သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်လျှင်၊ ကားတိုင်ပေါ်က ဆင်းလော့ဟု အော်၍ ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။
ထိုလမ်းကို ဖြတ်သန်းသွားလာသော သူတို့ကလည်း ဗိမာန်တော်ကို ဖြိုဖျက်၍ သုံးရက်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ပြန်သောသူ၊ ကိုယ်ကိုကိုယ်ကယ်တင်လော့” (မဿဲ၂၇း၃၉)ဟူ၍ ကဲရဲ့ပြော ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ လူကြီးအကဲတို့ကလည်း ထိုနည်းတူ ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခဲ့ကြသည်။
“ထိုနည်းတူ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲ့တို့က၊ ဤသူသည် သူတပါးတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏၊ ကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်ပါ တကား၊ ဣသရေလရှင်ဘုရင်မှန်လျှင်၊ လက်ဝါးကားတိုင်မှ ယ္ခုဆင်းပါ လေစေ၊ ဆင်းလျှင် ငါတို့ယုံကြည်မည့်”(မဿဲ ၂၇း၄၁-၄၂)။
မကြာသေးမီ အစောပိုင်းတွင်၊ ရောမစစ်သားတို့သည် ယေရှုအားရိုက်နှက်ကြပြီး၊ ဆူးရစ်သရဖူကိုလည်း ဆောင်းစေကြသည်၊ ပါးကိုလည်းဆွဲရိုက်ကြသည် ၊ မိမိကိုကို ကားတိုင်ပေါ်မှ ကယ်တင်လောဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။
“သူသည် ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြီး။ ငါသည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်၏ ဟုဆိုပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်သည် သူ၌အလိုတော်ရှင်လျှင်၊ ယခုပင် ကယ်တင်တော်မူပါလေစေဟု ပြက်ယယ်ပြု၍ ပြောဆိုကြ၏။ ထိုနည်း တူ ကိုယ်တော်နှင့်တကွ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ ရိုက်ထားသော ဓါးပြတို့ သည်လည်း ကဲ့ရဲ့ဖြစ်တင်ကြ၏” (မဿဲ၂၇း၄၃-၄၄)။
ကားတိုင်ပေါ်ဆွဲထားသော ဒုတိယထားပြကလည်း “သင်သည် ခရစ်တော်မှန်လျှင်၊ ကိုယ်ကို၎င်း၊ ငါတို့ကို၎င်း၊ ကယ်တင်လော့ဟု ကိုယ်တော်ကို ကဲရဲ့၍ ဆိုလေ၏ (လုကာ ၂၃း၃၉)။
အဘယ်ကြောင့် လူတို့သည် တပြိုင်နက် “လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှဆင်းလော့” ပြိုင်တူကဲ့ရဲ၍ ဆိုကြသနည်း? အဘယ်ကြောင့် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ရကြသနည်း? ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး၊ ကျမ်းပြုဆရာ၊ လူအကြီးအကဲ့၊ ရောမစစ်သားတို့နှင့် ကားတိုင် ပေါ်ကဓားပြပါမကျန် တညီတညွတ်တည်း “သင်သည် ဘုရားသခင်၏ သားတော် မှန်လျှင် ကားတိုင်ပေါ်မှ ကိုယ်ကိုဆင်းလော့”ဟူ၍ ပြောဆိုကဲ့ရဲကြသည် (မဿဲ၂၇း၄၀)။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှ မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်လော့၊ ဆင်းလော့ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ပြောဆို ခြင်းသည် စာတန်မာန်နတ်၏ စေ့ဆော်မှုဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်သံသယ ကင်းပါသည်။ အစောပိုင်း၌လည်း ရှင်ပေတရုက၊ ကိုယ်တော်အား၊ သခင်၊ “ကိုယ်တော်၌ ဤသို့မဖြစ် ပါစေနှင့် ဤအမှုသည် ကိုယ်တော်၌မရောက်ရ”ဟု ပြစ်တင်သောစကားကို လျှောက်ခဲ့ ပါသည် (မဿဲ၁၆း၂၂)ဟူ၍ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ စာတန်မာန်နတ်က၊ လက်ဝါးကား တိုင်ခရီးသို့ ယေရှုဘုရားမသွားရန်၊ ပေတရုကို သွေးထိုးစေ့ဆော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ယေရှုဘုရားအား လက်ဝါးကားတိုင်ခရီးသို့ မလျှောက်လှမ်း စေလိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရကြပါသည်။ စာတန်သည် လက်ဝါးကားတိုင်နှင့် ခရစ်တော် ဘုရား၏ အသွေးတော်ကို အလွန်မုန်းတီး၍ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်သားတို့၏ နေရာ၌ ခရစ်တော် အသေခံခြင်းမရှိဘဲ့၊ လူသည်ကယ်တင်ခြင်းမရရှိနိုင်ကြောင်း စာတန်မာန်နတ် သိနားလည်းထားပါသည်။ “ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကယ်တင်လော့။ လက်ဝါးကားတိုင်မှ ဆင်းလော့ဟု မိမိတို့ခေါင်းကို ညွတ်၍ ကဲ့ရဲ့ကြခြင်း”သည် စာတန်မာန်နတ်က လူဆိုး တို့အားစေ့ဆော်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ (မာကု၁၅း၃၀)။
သို့သော် ယေရှုသည် ထိုသူတို့၏ စကားကို နားမထောင်သည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ! ယေရှုသည်မိမိမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ကားတိုင်ပေါ်က၊ ကိုယ်တော်သည် လွယ်လင့်တကူ ဆင်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ထိုသို့ ဆင်းခဲ့မည်ဆိုလျှင်၊ အဘယ်မည် သောသူကမှ ကယ်တင်ခြင်း ရရှိမည်မဟုတ်သလို၊ ထာ၀ရအပြစ်ငရဲ့သို့ စီရင်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်!
အပြစ်လူသားတို့ ထိုကာရာနီ၌ အသေခံရမည်
ကိုတော်အား ထိုတိုင်ပေါ်၌ ကျွန်ုပ်တွေ့ရ
(၁၈၉၅-၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ အေ.ဗီးစ် ဘက်စ်ဆန် ခရစ်ယာဉ်ဆန်သီကုံးသော
အခုတွင်၊ ယေရှုဘုရား၏ကားတိုင်း၌ အသေခံခြင်း၏အဆုံးပိုင်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့သွား ရောက်လေ့လာကြရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် စစ်သည်တဦးထံမှ ပုံးရည်ကိုခံခဲ့ ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဆောင်ရွက်စရာအမှုရှိသမျှ အကုန်ပြီးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်သည် “အမှုပြီးပြီ”ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။
“ယေရှုသည် အမှုပြီးပြီဟု မိန့်တော်မူလျက် ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုက်ညွတ် ၍ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူ၏” (ယောဟန် ၁၉း၃၀)။
ခေါင်းတော်ကို ငိုက်ဆိုက်ညွတ်၍ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူ၏။
ရှင်မဿဲ၊ ရှင်မာကုနှင့်ရှင်လုကာတို့က၊ ယေရှုသည် အသက်တော်စွန့်တော် မမူခင် ကြွေးကြော် အော်ဟစ်ငိုယိုခဲ့သည်ဟု ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ မည်သို့သော ငိုယိုခြင်းကို မူကား ရေးမှတ်ထားခြင်းမရှိပါ၊ ရှင်ယောဟန်တဦးတည်းကသာလျှင်၊ “အမှု ပြီးပြီ”ဟူ၍ ကြွေးကြော်အော်ဟစ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါသည်။ ဒဒွှနအနူနျအငေဓ သည် ဂရိဘာသာ စကားဖြစ်၍ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ရေးသားဖေါ်ပြထားပါသည်။ ၎င်းဂရိဘာသာစကားကို အင်္ဂလိပ်လို (''It is finished") စကားလုံးသုံးလုံးဖြင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
အမှုများစွာကို ပြီးမြောက်အောင် ယေရှုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ထိုအများ ထဲက သုံးခုကိုသာလျှင် ကျွန်ုပ်ဖေါ်ပြပေးပါမည်၊ ၁။ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဝေဒနာရှိသမျှအမှုကို ပြီးစီးခြင်း၊၂။ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုဆန့်ကျင်နေခြင်း အမှုမှ ပြီးစီးခြင်းနှင့် ၃။ကယ်တင်ခြင်း အမှုပြီးစီးခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၁။ ပထမ၊ ယေရှုသည်၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခဝေဒနာရှိသမျှအမှုကို ပြီးစီးမူပြီ။
ကိုယ်တော်သည် ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်တလျှောက်လုံး ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားခဲ့ပါသည်။ ယေရှုငယ်စဉ်ဘ၀၌လည်း ဟေရုဒ်မင်းကြီး၏ သတ်ဖြတ်ရန်ကြံစဉ်ခြင်း ကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ယောသပ်နှင့်မာရိတို့က ဝေးလံသော အီဂျစ်ပြည်သို့ မင်းကြီး၏ ရန် စွယ်မှ ပုန်းရှောင်ခဲ့ကြပါသည်။
ကိုယ်တော်သည်၊ ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးတပါးသူတို့၏ အထင်လွဲမှု၊ နားလည်မှု လွဲမှားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ သူ့၏ မိခင်နှင့်ညီအစ်ကိုတို့၏ “သက်ဆိုင်ပါတ်သက်မှုမရှိ” ဘ၀ဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။ အစပထမ၊ ကိုယ်တော်သည် တရားဒေသနာတော်ကို ဟောကြားသောအခါ တောင်ထိပ်မှ တွန်းချရန်ဘေးနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ယဇ်ပရော ဟိတ်အကြီးနှင့် ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အသေသတ်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏ ပြောခဲ့ကြပါသည်။ ဖါရိရှဲတို့က၊ ကိုယ်တော်အား ကျောက်ခဲ့ဖြင့် ပစ်သတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ တပည့်တော်တို့က၊ ကိုယ်တော်အားစွန့်ပယ်ရန် ကြိုး စားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်က “သင်တို့သည်လည်း ထွက်သွားခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိကြသလော့” (ယောဟန် ၆း၆၇)ဟူ၍ မေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော် သည် ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်ခြင်းကို အမြဲတစေခံ ခြင်းဖြင့်၊ အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်။ နမိတ်လက္ခဏာများစွာကို ပြသခဲ့သော်၎င်း၊ အနာငြိမ်း ခြင်းကို ပြုခဲ့သော်၎င်း၊ လူအများတို့က နတ်ဆိုးစွဲသောသူဟုသာ စွပ်စွဲခဲ့ကြပါသည်။
ဂေသရှေမန် ဥယျာဉ်တော်၌လည်း၊ သူ့တပည့်တော်တို့သည် အိပ်မောကျလျှက်၊ ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်၌ ယေရှုသည် “ချွေးထွက် တော်မူသည်ကား မြေပေါ်၌ကျသော သွေးစက်ခဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း” (လုကာ၂၂း၄၄)။ ချွေးမှအသွေးကဲ့သို့ကျသည်ထိ ပူပန်ခဲ့ပါသည်။ နောက်မကြာခင် ယေရှုသည် အဖမ်းခံ တော်မူသောအခါ “ထိုအခါ တပည့်တော်အပေါင်းတို့သည် ကိုယ်တော်ကို စွန့်ပစ်၍ ပြေး ကြ၏” (မဿဲ၂၆း၅၆)။ တပည့်တော်တို့၏ စွန့်ပယ်ခြင်းကို ခံခဲ့ပါသည်။
ရောမဧကရာဇ်မင်း ပုန္တိပိလတ်မင်း၏ ရှေ့မှောက်တော်သို့ ဆွဲခေါ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါ သည်။ ပိလတ်မင်း၏ အမိန့်တော်အားဖြင့် သေလုမျှော့ပါး ရိုက်နှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါ သည်။ မုတ်ဆိတ်မွှေးဆွဲချခြင်းနှင့် မျက်နှာတော်ရိုက်ပုတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ထိုသူတို့ က ဆူးဖြင့်ယက်သော ဆူးရစ်သရဖူကို သွေးထွက်သည့်တိုင် ဆောင်းစေခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှုသည် ပရောဖက်စကားအားဖြင့် ကြိုတင်၍ မိန့်တော်မူခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ခံရပါသည်။
“ရိုက်သောသူတို့အား ငါ့ကျောကို၎င်း၊ မုတ်ဆိတ်ကိုနုတ်သောသူတို့အား ငါ့ပါးကို၎င်း၊ ငါအပ်၏အရှက်ခွဲခြင်းနှင့် တံထွေးထွေးခြင်းမှ ငါသည် ကိုယ်မျက်နှာကို မလွှဲ” (ဟေရှေယ ၅ဝး၆)။
ထို့နောက်၊ ထိုသူတို့က ယေရှုအား ကားတိုင်တော်ကို ကာရာနီကုန်းတိုင်ထမ်းစေခဲ့ ကြသည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ခြေတော်၌၎င်း၊ လက်တော်၌၎င်း သံမှိုစွဲလျှက်၊ ချိတ်ဆွဲ ခြင်းကို ခံခဲ့ပါသည်။ ယေရမိမြည်တမ်းစကား ၁း၁၂၌ ဖေါ်ပြခဲ့သော ညှဉ်းဆဲခြင်း အတိုင်း ယေရှုလျှောက်လိုက်ခဲ့ပါသည်။
“အိုခရီးသွားလာသောသူအပေါင်းတို့၊ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်ကြလော့၊ ထာ၀ရ ဘုရားသည် ပြင်းစွာအမျက်ထွက်သောနေ့၌ ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲ၍၊ Jဖစ်စေတော် မူသော ဒုက္ခနှင့်တူသော ဒုက္ခရှိသလော့” (မြည်တမ်း၁း၁၂)။
“အမှုပြီးပြီ”ဟူ၍ ကြွေးကြော်သောအခါ၊ ကိုယ်တော်ခံစားရမည့် ဆင်းရဲခြင်း ဝေဒနာအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ဆိုလိုရာတွင်၊ ဤကမ္ဘာလောကတခုလုံး၌ ခံစားခဲ့ရသော ဒုက္ခဝေဒနာမှသော်၎င်း၊ အပြစ်သားအပေါင်းတို့နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ခံစားရသော နာကျင့်ခြင်းအားလုံးကို ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့် ကားတိုင်ခရီးကို လျှောက်လှမ်းခြင်းဖြစ်သည်ကို သံသယမရှိပါနှင့်!
“ထိုသခင်သည် မိမိရှေ့၌ထားသော ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းကြောင့် ရှက်ကြောက်သော အရာကိုမမှတ်ဘဲ၊ လက်ဝါးကားတိုင်၌ခံပြီး” (ဟေဗြဲ ၁၂း၂a)။
ဤလောက၏ ညှဉ်းဆဲခြင်းအားလုံးအဆုံးတိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို သိသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ကားတိုင်ခရီးကို လှမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွမည်ဖြစ်ပြီး၊ “ခမည်းတော်၏ လင်္ကျာတော် ဘက်၌ စံမြန်းရသော အခွင့်ကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။” (ဟေဗြဲ ၁၂း၂ဘ)။ ကိုယ်တော်ကြွေး ကြော်ခဲ့ခြင်းအား မအံ့ဩမိပါနှင့်
(၁၈၃၈-၁၈၇၆ခုနှစ်၊ ဖိလ်စ်.ပီ.ဘလင့်စ်း၊ သီကုံးရေးသားသော
၂။ ဒုတိယ၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုဆန့်ကျင် နေခြင်းအမှုမှ ပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။
အဆိုးဝါးဆုံးသော ညှဉ်းဆဲခြင်း၊ ကားတိုင်ခရီးသို့ ယေရှုဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို မိမိအပေါ် ယူတင်ပြီး ထမ်းထုတ်သွားခဲ့ပါသည်။ “အပြစ်နှင့်ကင်းစင် သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏” (၂ကော၅း၂၁)။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အဖိုးအခ ကိုသာ ခံရခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အပြစ်ကင်းသောသူ့ ခန္တကိုယ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် ကို ယူတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေတရု မိန့်ကြားခဲ့သည်မှာ၊
“ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင်၊ သစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီ” (၂ပေ၂း၂၄)။
ကားတိုင်ခရီး၌၊ ဆိုးဝါးသော ညှဉ်းဆဲခြင်းသည် ခန္တကိုယ်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာမဟုတ်ပါ၊ အချို့လူတို့ပင်လျှင်၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ မီးအရှို့ခြင်းကို ခံခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် ယေရှု၏ခံရသော ညှင်းဆဲခြင်း ဝေဒနာသည် အခြားသောသူတို့ မခံနိုင်သော ညှင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိတ်ချက်စ် ဝုန့်ဘရမ်း၏ စာအုပ်ဖြစ်သော Tortured for Christ, ၌ ယဇ်ပုရော ဟိတ်တဦးသည် ကွန်မြူးနစ်အကျဉ်းထောင်၌ အလွန်အမင်း ညှင်းပန်းနှိပ်စကjfခင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်က ဝုန်းဘရမ်းအားပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကျွန်ုပ်ကိုခွင့် လွှတ်ပါဗျာ ညီအကိုရာ၊ ကျွန်ုပ်တော်သည် ခရစ်တော်ခံရသည်ထက်ကို ခံခဲ့ရတယ် ကွာ”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုလူသည် ထိုကဲ့သို့ ဝေဒနာကို ခံစားရသည်ဟု ဆိုခြင်းသည် မှားယွင်းနေသည်ကို ကျွနုပ်နားလည်နိုင်ပါသည်။ အဘယ်မည်သူကမှ ယေရှုခံစားသည်နည်းတူ ခံစားမည်မဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ အဘယ်မည်သူကမှ ဤလောကတခုလုံး၏ အပြစ်ကို ကိုယ်တိုင် မိမိတို့ကိုယ်ပေါ်၌ ထမ်းရွက်ခြင်းမရှိ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်၏ စီရင်ခြင်းဒဏ်ကို၎င်း၊ အပြစ်အားလုံးကို၎င်း ကိုယ်တော်တိုင်ထမ်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသကိုလည်း ယေရှုသည်ကားတိုင်ပေါ်ဝယ် ခံစားခဲ့ပါ သည်။ လုံး၀အမှန်တကယ် ကိုယ်တော်ခံစားခဲ့ပါသည်။ သမ္မားကျမ်းစာတော် မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်မှာ၊
“ထာ၀ရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏ အပြစ်များကို သူ့အပေါ်၌ တင်တော်မူ၏” (ဟေရှာ ၅၃း၆)။
“ထာ၀ရဘုရားသည် သူ့ကိုနှိက်စက်ခြင်းငှါ အလိုတော်ရှိ၍ နာစေတော်မူ ၏ သူသည်အပြစ်ဖြေသော ယဇ်ကိုပူဇော်ပြီးမှ မျိုးနွယ်တော်ကို မြင်ရလိမ့် မည်။ အသက်တော်သည်လည်း ရှည်လိမ့်မည်။ ထာ၀ရဘုရား၏ အကြံ တော်သည်လည်း သူ၏လက်၌ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ဟေရှာ၅၃း၁၀)။
ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ကို၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကို ကိုယ်တော်တိုင် ထမ်းရွက်ခြင်းဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်အသေခံတော် မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှု၏ကြွေးကြော်ခြင်းကို အံ့အားမသင့်ပါနှင့်၊
“အကျွန်ုပ်၏ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားအဘယ်ကြောင့် အကျွန်ုပ်ကိုစွန့် တော်မူသနည်း? (မဿဲ၂၇း၄၆)။
ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်၊ အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်တော်မူသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိချစ်မြတ်နိုးသော သားတော်ကိုပင် စွန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုအသေခံခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို လုံး၀ဖြေလွတ်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ယေရှုသည် အောက်ပါအတိုင်း ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။
သင်သည် ယေရှုဘုရားကို ယုံကြည်လက္ခံသော ထိုခဏတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ အပြစ်စီရင်ခြင်း သင့်အပေါ်တည်မနေတော့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း? အကြောင်းမှာ၊ ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းသည်၊ သင့်နေရာသို့ ယေရှုအစားဝင်အသေခံပေးဆပ်ပြီး ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ယေရှုကို သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်ကို မယုံကြည်ပါက၊ သင့်အပြစ်အဖိုးအခအတွက် မီးငရဲ၌ ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တတိယ၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ အမှုပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။
မကြာသေးသောအချိန်၌ လူငယ်သုံးဦး ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ၊ ကျွန်ုပ်ဆီလာ ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုလူငယ်တို့သည် သူ့တို့၏ ဖခင်ကို မုန်းတီးကြသည်။ ထို့အပြင် ပညတ်တော်ဆယ်ပါးမှ ပဥ္ခမမြောက် ပညတ်တော်ကို ကျူးလွန်းခဲ့ကြပါသည်။ (ထွက်၂ဝး၁၂)။ ထိုလူငယ်သုံးယောက်တို့အား ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီး၊ မိမိတို့အပြစ် ကို အသွေးတော်မြတ်၌ ဆေးကြော်ဖို့ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့သည်။ ထိုသုံးယောက်ထဲက တစ် ယောက်ကား ကြိုက်နှစ်သက်သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ထိုသူသည် ခရစ်တော်ဘုရားကို လက္ခံယုံကြည်သောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် ထိုလူငယ်သည် မိမိ အိမ်သို့ ပြန်သွားပြီး သူ့ဖခင်အား ဝန်ချတောင်းပန်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကျန်လူငယ်နှစ်ယောက်မူကား ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ မိမိတို့၏အိမ်ကို သွားရောက်ပြီး မိမိတို့ဖခင်အားတောင်းပန် ခဲ့ကြသည်။ တကယ်ရှက်စရာပါလား! ယေရှု သခင်ကို ကိုးစားခြင်းမရှိဘဲ၊ မိမိတို့ဖခင်ကို သွားရောက်တောင်းပန်းခြင်းတည်းဟူသော ကောင်းသောအမူအကျင့်ကိုသာ ကိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မူသည် ကား၊
“ငါတို့ကျင့်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့် မဟုတ်ဘဲ၊ မိမိသနား ခြင်း၊ ဂရုဏာတော်နှင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏’ ‘(တိတု ၃း၅)။
ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းသည် ကောင်းသောအကျင့်ကို လုပ်ဆောင်နေကြခြင်း ကြောင့်မဟုတ်ပါ! ကားတိုင်ပေါ်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်သော၊ ခရစ်တော်၏ သနားခြင်းဂရုဏာ တော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်! ဖိလိပ္ပိထောင်မှူးက “ကျွန်ုပ်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်သောငှါ၊ အဘယ်သို့ပြုရပါမည်းနည်း? (တမန် ၁၆း၃၀)ဟူ၍ မေးခဲ့ပါသည်။ ရှင်ပေါလုက ဖိလိပ္ပုအား “သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လော့၊ ယုံကြည်လျှင်၊ သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့် မည်” (တမန်၁၆း၃၁)။ ထိုသို့ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတို့လည်း ယေရှုကိုယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်!
ယေရှုသည် သင့်အဖို့လုပ်ဆောင်ရန် ရှိသမျှ ကားတိုင်ပေါ် ပြီးစီးပြီဖြစ်ပါသည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် “အမှုပြီးပြီ”ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဆိုလိုသည်မှာ လုပ် ဆောင်သင့်သမျှအတိုင်း ပြီးစီးခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှါ၊ သင်ဘာမှ လုပ်ဆောင်စရာမလိုဘဲ၊ ယေရှုကို ယုံကြည်ရန်သာလိုပါသည်။ သင်သခင် ယေရှုကို ယုံကြည်သည်တခဏချင်းတွင်၊ သင်သည် ထာ၀ရအသက်ရှင်ခြင်းရရှိပြီဖြစ်ပါ သည်!
ဂျင်းစ့် ဟောဆန်၊ တေလာသည်၊ တရုတ်နိုင်ငံပြည်တွင်း သာသနာကို စတင် တည်ထောင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသို့ မသွားခင်တွင်၊ အသက်တ ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်တွင် “ခရစ်တော်၏ ပြီးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့သော အမှု” ဟူသော စာအုပ် ငယ်လည်းပဲ ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ဖတ်ကြားနေစဉ်၊ လူတိုင်းကယ်တင်ခြင်း ရရှိဖို့ရန်၊ ယေရှုဘုရားကားတိုင်ပေါ် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော အမှုအားဖြင့်သာ တည်သည်ကို သူနားလည်ခဲ့ပါသည်! ထိုအခါ ဟောဆန်တေလာသည် ဒူးထောက်လျှက် ယေရှုဘုရားကို ယုံကြည်လက္ခံခဲ့ပါသည်။ သူသည်ချက်ချင်း ဆိုသလိုပင် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပြီး၊ပြီးချင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ သာသနာပြုသွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဟောဆန်တေလာ လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ သင်တို့လည်း လုပ်ဆောင်ကြဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ နောင်တရလျှက်၊ ရိုးရှင်းစွာ ယေရှုသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကိုးစားလိုက်ပါ၊ ထိုအခါ သင့်အား ယေရှုသည် သနားတော်မူမည်ဖြစ်၍ သင်၏အပြစ်ကိုလည်း ခွင့်လွတ်မည်ဖြစ် ပါသည်။
“အမှုပြီးပြီ” (ယောဟန် ၁၉း၃၀)။
သင့်အသက်တာ အသစ်တဖန်ရှင်သန်လာဖို့ ကားတိုင်ပေါ် ယေရှုဘုရားလုပ်ဆောင်သမျှ တို့အား ကိုးစားလိုက်ပါ၊ သခင့်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ၊ ကိုးစားလိုက်ပါ၊ ဒီမနက်တွင်ပင် သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်!
ကျွန်ုပ်တော်သီချင်းသီဆိုပါမည်၊ အကယ်၍ သင်သည်ခရစ်ယာဉ်ယုံကြည်သူတဦး ဖြစ်လိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဆွေးနွေးခန်းဆီသို့ လှမ်းသွားလိုက်ပါ၊ ထိုနေရာ၌ ဒေါက်တာ ကေကန်က သင့်အဖို့ဆုတောင်းပေးပါမည်၊ ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါ၊ ဆွေးနွေး ပေးပါမည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သီချင်းဆိုနေစဉ် ထိုအခန်းသို့သွားကြပါ။
ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ထံသို့ ခေါ်သော၊ သံတော်ကျွန်ုပ်ကြားရ
သွန်းတော်မူသော သွေးတော်ဖြင့်၊ ဆေးကြော်စင်ကြယ်စေပါ
(၁၈၂၈-၁၉၁၉၊ခုနှစ် လေးဝီ့စ်ဟတ်ဆောက် သီကုံးရေးသားသော
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန် အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မာကု၁၅း၂၉-၃၇ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ ၁၈၉၅-၁၉၈၅ခုနှစ်၊ အေးဗီးစ်ဘတ်ဆန်၊ ခရစ်ယာဉ်ဆန် သီကုံးသော “မင်္ဂလာရှိသော ကယ်တင်ရှင်” ဓမ္မသီ ချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
“ယေရှုသည် ပုံးရည်ကိုခံပြီးမှ အမှုပြီးပြီဟ မိန့်တော်မူလျှက်၊ ခေါင်းတော် ကိုငိုက်ဆိုက်ညွတ်၍ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူ၏”(ယောဟန်၁၉း၃၀)။
(ရှင်မဿဲ၂၇း၄၀၊ ၄၁-၄၂၊ ရှင်လုကာ၂၃း၃၆-၃၇၊ ရှင်မဿဲ၂၇း၄၃-၄၄၊
ရှင်လုကာ ၂၃း၃၉၊ ရှင်မဿဲ၁၆း၂၂၊ ၂၃၊ ရှင်မာကု ၁၅း၃၀)
ရှင်ယောဟန်၆း၆၇၊ ရှင်လုကာ၂၂း၄၄၊ ရှင်မဿဲ၂၆း၅၆၊ ဟေရှာ၅ဝး၆၊
ယေရမိမြည်တမ်း၁း၁၂၊ ဟေဗြဲ ၁၂း၂၊
၂။ ဒုတိယ၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုဆန့်ကျင်
နေခြင်းအမှုမှ ပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။ ၂ကော ၁၅း၂၁၊ ၁ပေ၂း၂၄၊ ဟေရှာယ၅၃း၆၊၁၀ မဿဲ၂၇း၄၆၊
၃။ တတိယ၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ အမှုပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။ ထွက်မြောက်ရာ၂ဝး၁၂၊